एलर्जीको जाँच 'स्किन प्रिक टेस्ट' के हो? :: डा कृपा डंगोल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
एलर्जीको जाँच 'स्किन प्रिक टेस्ट' के हो?
डा कृपा डंगोल बुधबार, चैत २३, २०७८, ०७:००:००
एलर्जीको समस्या संसारका करिब ३० देखि ४० प्रतिशत मानिसहरुमा रहेको अनुसन्धानहरुले देखाएको पाईन्छ। नेपालमा पनि ठुलो संख्यामा एलर्जीका बिरामीहरु छन्। तर हालसम्म यसको आधिकारिक तथ्यांक हामीसँग छैन।
एलर्जीको निदान गर्न बिरामीका लक्षणहरु र विभिन्न अंगहरुमा पाइने संकेतहरु महत्वपुर्ण हुन्छन्। त्यसैगरी कुन एलर्जी रहेछ भनेर पत्ता लगाउन विभिन्न जाँचहरु गर्न सकिन्छ।
एलर्जी पत्ता लगाउन गरिने सबैैभन्दा सरल, सस्तो र भरपर्दो जाँच भनेको स्किन प्रिक टेस्ट हो। यो जाँच एलर्जीका बिरामीको छालामा गरिन्छ। बिरामीको पाखुरा वा ढाडको छालामा विभिन्न एलर्जेनको प्रशोधित घोल राखिन्छ र सानो सुईले घोचेर छालामा देखिने परिवर्तनहरुको मापन गरिन्छ। स्किन प्रिक टेस्टगरेर बिरामीलाई एलर्जी गराउने कारक तत्वहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ, जस्तैः रुख बिरुवाका पराग, डस्ट माइट, ढुसी, किरा, घरपालुवा जनावर, खाना इत्यादी।
स्किन प्रिक टेस्टगर्नुपर्ने अवस्थाहरुमा नाकमा हुने एलर्जी (एलर्जीक राइनाटिस), आँखामा हुने एलर्जी (एलर्जीक कन्जन्टिभाइटिस्), एलर्जीक दम, खानाको एलर्जी र छालाको एलर्जी हुन्।
बिरामीको आफ्नै शरीरमा परीक्षण गरिने हुनाले यसको परिणाम अरु एलर्जीका जाँचहरु भन्दा बढी भरपर्दो र विश्वसनीय हुन्छ। स्किन प्रिक टेस्टको रिर्पोट छालामा आउने परिवर्तन हेरेर गरिन्छ, जुन साधारणतया टेष्ट सुरु गरेको १५ देखि २० मिनेटमा देख्न सकिन्छ। बिरामीले आफूलाई भएको एलर्जीको रिर्पोट तत्काल पाउन सक्ने र आफैंले एलर्जीक प्रतिक्रिया देख्न सक्ने भएकोले बिरामीको उपचारमा यो टेष्टले थप मदत प्रदान गर्दछ।
स्किन प्रिक टेस्टगर्न नमिल्ने अवस्थाहरु पनि हुन सक्छन्, जस्तैः गर्भावस्था, छालाको रोग भएको बेला, बालबालिकाहरुमा, दमको रोग बढेको बेला वा कुनै औषधिहरु खाएको वेलामा। यस्ता अवस्थाहरु भएमा एलर्जी जाँच गर्ने डाक्टरको उचित परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ।
स्किन प्रिक टेस्टएकदम सुरक्षित एलर्जीको टेष्ट विधि हो। छालामा जाँच गरिएका ठाउँहरुमा देखिने डावर, रातोपना र चिलाउने सामान्य प्रतिक्रियाहरु हुन्। यी प्रतिक्रियाहरु टेष्ट गरेको १ देखि २ घण्टाभित्र कम हुंदै जान्छन्। कुनै कुनै अवस्थामा अनुहार वा ओठ सुन्निने, शरीर चिलाउने वा श्वासप्रश्वासमा गार्‍हो हुने समस्याहरु आउन सक्दछन्। तर ती समस्याका सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ र उपचार सम्भव हुन्छ।
एलर्जीको कारकतत्व (एलर्जेन) पत्ता लगाउनु एलर्जीको उपचारको प्रथम खुड्किलो हो। एलर्जेन पत्ता लगाएपछि मात्र एलर्जी गराउने कारक तत्ववाट जोगिने उपायहरु थाहा पाउन सकिन्छ। साथै एलर्जेन पत्ता लगाएर इम्युनोथेरापी उपचार विधिवाट एलर्जीको उपचार सम्भव हुन्छ। नेपालमा हालसम्म पनि एलर्जीको उचित निदान, जाँच र उपचार बिरामीले पाएको अवस्था छैन।
एलर्जीको समस्याले बिरामीको दैनिक जिवनयापनको गुणास्तरमा ह्रास र दीर्घकालीन जटिल समस्याहरु भविष्यमा निम्त्याउने भएकोले समयमै एलर्जीको जाँच गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।
-(लेखक त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी नाक,कान,घाँटी रोग विशेषज्ञ हुन्।)